चन्द समूहलाई ओलीको आग्रह- ‘सुतली बम पड्काएर किन बस्नुहुन्छ ? देश विकासको बाटोमा लाग्नुस्’ - समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउन आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार पोखरामा आयोजित नेकपा ओली समूहको गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आए जनताले जयजयकार गर्ने बताए ।
‘कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरू सबैलाई सही बाटो समाउनुस् भन्न चाहन्छु । विप्लवलाई भन्न चाहन्छु उहाँहरू हिँडिरहेको बाटो काम लाग्दैन । शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउनुस् जनताले जयजयकार गर्नुहुन्छ । सुतली बम पड्काएर किन बस्नुहुन्छ ? देश विकासको बाटोमा लाग्नुस्। देशलाई समृद्ध बनाउने, मान्छेलाई भयरहित बनाउने, सभ्य भयरहित देश बनाउने अभियान राख्नुस् । किन तर्साएर बस्नुभएको छ ?,’ ओलीले भने ।
चन्द समूहले देश विकासको अभियान बनाए सरकारले साथ दिने ओलीको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो सकारात्मक कदममका लागि सरकार साथ दिन तयार छ । म ठान्छु छिट्टै नै उहाँहरूसँग कुराकानी हुनेछ र उहाँहरूले सही बाटो समाउनुहुनेछ ।’
गत शनिबार एक विज्ञप्ती जारी गरेर चन्दले सरकारसँग वार्ताका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ १५:५७